विश्वभर त'हल्का मच्चा'उदै आयो को रो,ना बिय'र ! यस्ता छन यसका फाइदाहरु - itnewsnepal
विश्वभर तहल्का मच्चाउदै आयो को रो ना बियर ! यस्ता छन यसका फाइदाहरु/ विश्वभर को रो ना भाइरसको आतंक जारी रहेको बेला सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु बिचमा भने कोरोना नामक एक बियर भाइरल बनेको छ ।
को रोनाका कारण विश्व तनाव रहेको बेला इन्टरनेटमा भने कोरो ना एक्स्ट्रा नामक बियरकोे खोजी तिब्र बनेको छ । अर्थात् कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेकै बेला गुगल लगायतका सर्च इञ्जिन र सामाजिक सञ्जालमा कोरो ना नामक बियरको खोजी बढेको हो । यसरी को रा,ना नामक बियरको खोजि हुनुमा को,रो ना भाइरसको नामसंग मिल्दो बियरको नाम हो । को रो नाको नामले लोकप्रिय बनेको यो ब्राण्डको बियर खोजिमा धेरै झुक्किएका हुन् । मानिसहरुमा कोरोना बियरप्रतिको कौतूहलता बढेको देखिएको छ ।
को रो,ना एक्स्ट्रा अमेरिकाको मेक्सीकोमा उत्पादित एक पहेलो रंगको बियर हो । यो अमेरीका बाहेकका अन्य देशहरुमा पनि बिक्रि वितरण हुदै आएको छ । सब्रेसेरी मोडेलो कम्पीद्वारा उत्पादित कोरोना बियरको माग निकै बढेको ।
पानीभित्रबाट सहतमा निस्केसरी छालामा बिस्तारै तीनवटा फरक-फरक रंगका सुईहरु प्रस्ट देखिन थाले। रातो रंगको धर्सो १२ अंकतिरको थोप्लो तिर सोझियो। निलो र हरियो रंगको सुई ६ बजेको थोप्लो तिर तेस्रियो। सुईहरु देखिएको ठाउँ छाम्दा पनि महसुस हुन्थ्यो।बाथरुमबाट निस्किए। हातको अनौठो घडी हेरे। घडीमा देखिएको दुईवटा दाँयाँबाँया रहेका दमजस्ता मध्ये एउटा अलिक बाहिर र अर्को केही भित्र छिरेको जस्तो थियो। बाहुला सारेर त्यसलाई छोपी बानेश्वर तिर लम्के। बानेश्वर चोकमा बाटो काट्नेको भित्र सदा झै बाक्लो थियो। कलेज जान लागेका केटीहरु चर्को स्वरमा गफ गर्दै थिए। चोकको बिचमा ट्राफिकको सिठ्ठिको आवाज झनै चर्को थियो। धुवाँ, धुलो, कोलाहाल, यो भन्दा त गाउँकै वातावरण ठिक। गाउँसंग तुलना गर्दै मान्छेको भिड भित्र बाटो काट्न उभिरहेको थिए। बाहुला सारेर घडी हेरे। त्यो बाहिर निस्किएको जस्तो दम थिचेझै औलाले धकेलेको मात्र के थिए, त्यो त साच्चै थिचियो, भित्र पस्यो। यो भित्र पस्नासाथ पहिले दबिएझै रहेको अर्को तिरको दम फुत्त बाहिर आयो। १२ बजे तिर तेर्सिएको रातो सुइ ६ बजेमा झर्यो। निलो सुई १२ तिर तेर्सियो। हरियो सुईमा कुनै हलचल देखिएन। छालाको सहतमा आएको हलचलबाट आँखा उठाए, अर्को अनौठो घट्यो। वरिपरि रहको बाटो काट्नेको भिड गायब! वरिपरि हेरे, डाँडापाखा अनि वनजंगल मात्र।
ज’ब काठमाडौंको सडकमा एभ्रो विमान दे’खियो
भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित नेपालको भु-भाग फिर्ता गर्नेछ : प्रधानमन्त्री ओली